Lo Fat Guy uyakuthanda ukuThengiswa kweCoca-Cola | Martech Zone
Lo mntu uFat uyakuthanda ukuthengisa kweCoca-Cola
NgoMgqibelo, uJanuwari 19, 2013 NgeCawa, Agasti 30, 2015 Douglas Karr
Ndidlulile kumanqatha… enyanisweni, kufuneka ndiphulukane nobunzima bendoda ephakathi ukuze ndibuyele ekutyebeni nje. Ndingathanda ukuyibeka ityala kwi-thyroid, i-genetics, umsebenzi wam, uxinzelelo lwam… into. Inyani yile, nangona kunjalo, ukuba ilungile ngokuthe ngqo. Xa nditya ngokufanelekileyo kwaye ndenza umthambo, ndiye ndinciphe. Xa ndingazilolongi okanye ndingatyi kakuhle, ndiye ndityebe. Ngamaxesha oxinzelelo kuxa ndiye ndithande ukushiya impilo yam nditshone enzonzobileni… kwaye amaxesha ebesoloko enexinzelelo kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Ukutyeba akuveli ekusweleni kolwazi ngesondlo okanye imithambo yokuqonda kunye nendlela umzimba osebenza ngayo. Ndikulungele ukubheja ukuba ndizifundile ezinye iincwadi, ndibukele amaxwebhu amaninzi kwaye ndiqonda ngakumbi malunga nesondlo kunabantu abaninzi abasempilweni. Ndikwabheja ukuba ndilahlile ubunzima ngaphezu kwakhe nabani na… amakhulu eeponti kule minyaka idlulileyo. Ngelishwa, ndizuze okuninzi, okuninzi ngenxa yokuswela kwam amandla kunye nokubekwa phambili kwezempilo kunye nokulingana emsebenzini ebomini bam.
Ngaphandle kothando lwam lomgubo omhlophe kunye neswekile ikwayintando yam kwi-Intanethi kunye nenkululeko. I-Intanethi ibonelela ngendawo yoluntu apho umntu okanye inkampani akufuneki ilinde ukuba iintatheli okanye urhulumente abeke ukukhanya kubo. Inkampani inokuthatha imicimbi ezandleni zayo, kwaye iphuhlise umyalezo wayo-ngaphandle kokuhluza, uluvo, okanye ukunyanzelwa. Kungenxa yoko le nto ndiyithandayo inyani yokuba ICoca-Cola ijongana nemingcipheko yezempilo enxulunyaniswa nemveliso yeentloko zayo kuthotho lweentengiso ezintsha.
Siphila kwihlabathi apho nanini na into ihamba gwenxa, siziva ngcono ngokukhomba ngeminwe nokugxeka omnye umntu endaweni yokuhlalutya indlela esinokuluchaphazela ngayo utshintsho. Amashishini ajolise lula, ngakumbi xa enenzuzo kakhulu. Hayi indlela ekulula ngayo ukubeka ityala kwiCoca-Cola kubhubhane wethu wokutyeba kakhulu kunokwenza ukuba abantwana bethu basebenze ngakumbi kwimisebenzi yangaphandle, ukubeka ii-smartphones zethu, ukuya ejimini, okanye ukutya okunempilo. Sityhola ukuthengiswa kwemveliso ekumgangatho wehlabathi endaweni yokuvela kwemisebenzi efuna amandla amancinci okanye hayi.
Okungqamene nakho nakuphi na ukuthengisa sisicwangciso sokuzama ukuba abantu abaninzi bathenge imveliso yakho rhoqo. Andikholelwa ukuba ukuthengisa kuyakhohlisa, kodwa ndiziva ngathi abantu bathatha kancinci kwaye banoxanduva lwezenzo zabo. Wonke umntu uyazi ukuba isoda ayisosiselo esinegalelo kwindlela yokuphila esempilweni. Andifuni iCoca-Cola ukuba indixelele loo nto… kodwa ndiyavuya kuba baxelela wonke umntu obahlaselayo malunga nemveliso yabo.
Ngendlela… bendineiglasi ezimbalwa zeCoke phezolo, kwaye bezingakholeleki. Namhlanje, bendinesidlo sakusasa esifanelekileyo, ndinqunqe ukutya okutyiwayo, kwaye bendinesidlo sangokuhlwa esifanelekileyo. Ngomso ndiceba ukukhwela ibhayisekile yam (ndibuhlungu namhlanje emva kokukhwela okokuqala kwiinyanga zeveki ephelileyo). Andiyidingi iCoca-Cola okanye urhulumente ukuba andixelele ukuba ndifuna ukufumana impundu yam kuloo bhayisekile ngomso.
tags: coca colaZorhweboimpilourhwebo
Iindleko zokusebenza kakubi kweWebhu
Lawula amaxesha amaninzi eWindowsPress ngeManageWP
Jan 21, 2013 kwi-8: 46 AM
Iposi enkulu uDoug! Ukusebenza ekubeni ubukrelekrele kwaye usempilweni kum kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo nakwi-2013 ngokunjalo. Nantsi into yokuba ubukrelekrele kwaye uxanduva ngakumbi kwaye ungabi sisidenge kwaye ubeke ityala kuyo yonke enye into ngaphandle kwethu!
Owu, kwaye ndizimisele ukukhwela umcimbi we-RAIN 2013 kunye nomntakwethu ngoJulayi. Ke, ndizakube ndifumana isali encinci yokulungiselela kwangaphambili nayo.
Jan 21, 2013 kwi-9: 10 AM
Kuhle! Umnqweno omhle!!!
Jan 21, 2013 kwi-9: 51 AM
Indlela efanelekileyo, njengesiqhelo, evela kwiCoke. Undikhumbuza ngokungcakaza - "dlala ngenkathalo". Ngokwam, esi sithuba sibonisa ezona mpawu zakho zithandekayo: ukunyaniseka nokungafihli nto. Ngaphandle kwento yokuba ungumthengisi okrelekrele, ezi mpawu zikwahlula ngokupheleleyo kwiphakeji kwaye zinegalelo kwimpumelelo yenkampani yakho. Ungumfo omnandi, Mnu. Doug.
Jan 21, 2013 kwi-10: 12 AM
Enkosi @ twitter-9755792: disqus!
Jan 24, 2013 kwi-9: 02 AM
Ngaba ndingumntu othandabuzayo kwigumbi elinqwenela ukuba ngabe bayenzile le nto kwiminyaka engama-30 eyadlulayo endaweni yokuzikhathaza ngokutyeba ngenxa yenzuzo? Kwaye ndihlala ndikuthiyile ukuqala ukuthandabuza kuba inyani yokuba i-DK ibuyile ekuhlaseleni ukukhaba intle.
Kumnandi ukuba uCoke wenza ukuthengisa okwaziyo impilo kumnandi- kodwa kwangaxeshanye ndicinga ukuba kungenxa yokuba ngoku kukho imali yabantu baseAtlanta. Isoda ikunika amandla akhawulezileyo kwaye ikunyothule emzimbeni ngaxeshanye yiyo loo nto ungenakufane ufumane enye. Ubuncinci andikwazi. Ayilungiswa. Into ekujongwana nayo kukuba abantu banokubala iikhalori kwaye basele i-Coca-Cola ngakumbi kwaye bathathe iikhalori ezivela kwenye indawo- njengeTshokholethi okanye uhamba ne-cheeseburger endaweni ye-Big Mac @ McDonalds.
Akukho zingelosi ekuthengiseni, kodwa umlo wakho ulungile kwaye ndiyakuxabisa, 'bromance.